Izezimali zedijithali ezinokwethenjelwa ngo-2021. Imali engcono kakhulu yedijithali yokutshala imali. Imali ye-digital ephephile kakhulu ekukhuleni okuzinzile nokungazitholi okuncane.
Imali eyishumi ephezulu kunazo zonke yedijithali ngokukhula okuzinzile kokuzuza ngonyaka odlule.
Izimali zedijithali ezithembekile
Ukukhula kwamaphesenti ngonyaka
(UND) 222.68 %
Universal Currency (UNIT) 5 966 %
UBU (UBU) 372.38 %
Photon (PHO) 291.28 %
Telcoin (TEL) 10 845 %
FREE Coin (FREE) 2 067 %
Storj (STORJ) 234.43 %
NOVA (NOVA) 78.14 %
United Bitcoin (UBTC) 154.31 %
SkinCoin (SKIN) 485.93 %
I-idijithali yemali ethembeke kunazo zonke yinsizakalo yewebhusayithi ye-ptptoratesxe.com, ekhombisa ama-izimali zeDividenti aphezulu ngokukhula kwezinga lokushintshashintsha okuzinzile kanye nokuqina kwezinga eliphansi.
Insizakalo eku-inthanethi "i-idijithali yemali ethembeke kakhulu" isebenzisa yonke imithombo etholakalayo evulekile evela ekushintshaniseni kwe-idijithali yemali futhi yenza isilinganiso semali ethembeke kakhulu ngesikhathi sangempela.
I-idijithali yemali ethembekile yi-crypto, okuyisikhathi eside ikhombisa izinga elihle lokukhula okuzinzile. Ukushintshashintsha kwentengo kuncane futhi akubucayi. Imali enjalo, njengomthetho, ibonisa isivuno esincane kodwa esizinzile. Izingozi zokutshala imali ethembekile kwi-idijithali yemali zincane.
I-idijithali yemali ethembekile ifanelwe kangcono ukutshala imali okuhlala isikhathi eside futhi okuthembekile.
Ngokungafani "Imali yedijithali eningi ethembekile" insiza, ekhombisa ukuqina kokukhula okuhle kwesilinganiso se-idijithali yemali, Imali engcono kakhulu ye-digital insiza ibonisa ama-izimali zeDividenti ngokukhula okuphezulu kwesilinganiso se-cryptocur lwemali esikhathini esihlaziywa.
Ukulinganisa kwama-cryptocurrensets amahle kakhulu kuguquka ku-inthanethi, ngoba ukuhweba ekushintshaniseni kwe-idijithali yemali kuyaqhubeka, futhi isilinganiso se-idijithali yemali sishintsha njalo.
Sebenzisa insiza "ethembeke kakhulu" ku-inthanethi futhi mahhala.
Ama-cryptocurrensets athembekile kakhulu we 2021
Uhlu lwama-cryptocurrensets athembekile we- $year wethulwa ngokukhethwa kwe-10 crypto ekuhleleni i-oda kusuka kokuthembeke kakhulu kuye kokungathembekile, ekunciphiseni kwe-oda lokuthembela.
Ukuthembela akunaso isimilo saso, futhi ngokuqhathanisa ama-izimali zeDividenti, sibonisa imininingwane njengephesenti lesilinganiso sokukhula ngonyaka owedlule.
Isilinganiso sama-cryptocurrensets athembeke kakhulu alethwa nge-2021. Ukuguquguquka nokwenza inzuzo kwalezi zimali kubhekwa njalo ngomsebenzi wethu.
Vakashela iwebhusayithi yethu futhi usebenzise insizakalo yama-izimali zeDividenti aphezulu athembekile e- 2021.
I-idijithali yemali ephephe kakhulu ye- 2021 insiza yethu yamahhala online, ekhombisa ukuvikeleka kakhulu, ngombono wethu, ama-cryptocurrensets lapho ungatshala imali ngokuphepha.
Sihlola ukuphepha kwama-izimali zeDividenti ngokuzinza noma ngokuguquguquka. Sikubheka njengephephile i-idijithali yemali engavumeli ukwehla okungathi sína, noma kulimaze ukukhula okusebenzayo. Ngeshadi eshintshashintshashintshashintshashintshi ye-idijithali yemali rate, kufanele ikhombise ukukhula okuzinzile unyaka nonyaka ukuze ukutshalwa kwemali kuyo kuyibuyisele.
Ukukhethwa kwama-cryptos aphephile, izintengo zawo nokuqina okuboniswa 2021. Intengo namandla we-exchange rate ye-crypto angashintsha nsuku zonke nokukalwa kwethu okuphezulu "Imali engcono kakhulu ye-digital 2021" ushintsho nsuku zonke.
Ama-Izimali zeDividenti ngokukhula okuzinzile nokuqina okuncane.
Ama-Izimali zeDividenti ngokukhula okuzinzile nokuqina okuncane kungenye yezinto ezinokwethenjelwa zokutshala imali.
Ukukhula okuzinzile kwe-crypto kuyathakazelisa ukuthi ngezikhathi ezahlukahlukene zokubika sihlala sibona inzuzo. Ukukhula okuzinzile kukhuthaza ukutshala imali ku-crypto isikhathi eside futhi kungathengiswa imali ngesikhathi esifushane.
Ukuguquguquka okuncane cishe kucishe kufane nokuqina futhi kukhombisa ukuthi akukuthandi ukwenza imali kwi-crypto isikhathi esifushane.
Ngokutshalwa kwemali okufushane, udinga ukubheka imali nge-volatility ephezulu ukuze ubambe inani eliphakeme futhi uthengise nge-idijithali yemali ngokunenzuzo.
I-crypto enokwehla okuncane nokuqina okuphezulu kufanelekile ekutshaleni isikhathi eside, mhlawumbe iminyaka eminingana.
Ithebula lama-cryptocurrensets athembeke kakhulu futhi avikelekile.
Ithebula lama-cryptocurrensets athembeke kakhulu futhi avikelekile - bonisa ukubuka kwethu isilinganiso esiphezulu sama-cryptocurrensets athembeke kakhulu.
Etafuleni le-crypto ephephe kunazo zonke ungabona igama lwemali ye-crypto kanye nezinga lokushintshwa kwayo ngamadola aseMelika.
Uma uqhafaza kwenye yamatheksthi athembeke kunazo zonke etafuleni, uzoqondiswa kabusha ekhasini elinemininingwane ephelele ngesilinganiso sokushintshwa kwale mali.
Ishadi lama-cryptocurrensets athembeke kakhulu futhi avikelekile.
Ishadi lama-izimali zeDividenti athembekile kakhulu futhi aphephile kungenye ithuluzi lamahhala eliku-inthanethi elibonisa isilinganiso esiphezulu semali ethembeke kakhulu.
Ishadi lama-cryptocurrensets aphephe kakhulu libonisa amandla entengo yamanani ama-cryptos aphezulu ayi-10 okuphepha okuphezulu kakhulu kwezokutshala imali ngokusho kwezilinganiso zethu.